कोरोनाको श्रोत खोजी गर्दै डब्लुएचओको टोली चीनमा – Khabar Silo
एजेन्सी । कोरोनाभाइरसको उत्पत्तिको श्रोतको खोजी गर्दै विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ) का विज्ञहरु चीन आएका छन् । डब्लुएचओका दुई जना विज्ञ चीन आएको चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता हुआ चुन्निीले सोमबार पुष्टि गरेका छन् ।
विश्वभरी महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोनाभाइरसको सङ्क्रमण सवैभन्दा पहिला चीनमा भेटिएकोले उनीहरु अध्ययनका लागि चीन आएका हुन् । दैनिक पत्रकार सम्मेलनमा परराष्ट्र प्रवक्ता हुआले अध्ययनका लागि आएका डब्लुएचओका विज्ञहरुले चिनियाँ वैज्ञानिक, चिकित्सा विज्ञ र सरोकारवालाहरुसँग छलफल गर्ने जानकारी दिए ।
‘उनीहरुले हाम्रा विज्ञहरुसँग सम्वन्धित विषयमा प्रश्नहरु गर्नेछन् र हाम्रा विज्ञहरुले जानकारी दिनेछन्’ प्रवक्ता हुआले भने । डब्लुएचओका स्वास्थ्य विशेषज्ञहरुले यस्तै छलफलका लागि अन्य देशहरुमा पनि जान सक्ने उनले बताए ।
‘कोरोनाभाइरसको विकासका लागि विभिन्न देश तथा क्षेत्रहरुमा धेरै चरण पुरा गर्नु परेको डब्लुएचओले पनि विश्वास गरेको छ, त्यही चरणहरुका बारेमा पहिचान गर्न उनीहरु आएका हुन’ उनले भने ।
धेरै ठाउँमा धेरै चरणबाट कोरोनाभाइरसको विकास भएकाले उनीहरु आवश्यकता अनुसार अन्य देशहरुमा पनि जानसक्ने उनले पत्रकारहरुलाई जानकारी दिए । यसअघि डब्लुएचओका महानिर्देशक टेड्रोस अधानोम गेब्रयेससले अघिल्लो महिना भनेका थिए, ‘कोरोनाभाइरसको श्रोत के हो भन्ने कुरा पत्ता लगाउनु धेरै महत्वपूर्ण हुन्छ ।’
यो विज्ञानसँग सम्वन्धित, सार्वजनिक स्वास्थ्यसँग सम्वन्धित विषय भएको, यसले सवैलाई प्रभावित पारेको र सरोकारको विषय भएकाले कसरी शुरु भयो, कहाँ उत्पत्ति भयो भन्ने कुरा पत्तालगाउनु पर्ने उनको भनाइ थियो । कोरोनाभाइरस पहिलो पटक गत बर्ष सन् २०१९ को डिसेम्बरमा चीनमा भेटिएको पुष्टि गरिएको थियो । त्यसपछि विश्वका धेरै देशहरुमा कोभिड–१९ को महामारी फैलिएको थियो ।
अमेरिकाका संक्रामक रोगका प्रमुख विज्ञ डा. एन्थोनी फाउचीले अमेरिका कोरोनाको ‘गम्भीर समस्या’ रहेको बताएका छन्। कोरोना भाइरसविरूद्धको लडाईंका लागि गठित अमेरिकी टास्क फोर्सले दुई महिनापछि गरेको ब्रिफिङमा बोल्दै डा. फाउचीले भने, ‘यसलाई हामीले खत्तम गर्ने एउटै तरिका भनेको सबै एकसाथ मिलेर हो।’ पछिल्लो समय अमेरिकाका १६ राज्यमा कोरोना संक्रमित उच्च संख्यामा बढेका छन्। स्वास्थ्य विज्ञहरूले […]
एजेन्सी । विवाह पवित्र सम्बन्ध हो जसमा बाँधिएका हर–कोहि यसको सम्मान गर्ने गर्छन् । र एक अर्कालाई विश्वास र अधिक प्रेम पनि । विवाह यस्तो सम्बन्ध हो जुन विश्वास, भरोसा र प्रेममा अडेको हुन्छ । तर आजभोलि विवाह बन्धनमा बाँधिइसकेका कयन् जोडीहरु एक अर्काप्रतिको अविश्वास, असन्तुष्टि र वेमेल विचारका कारण विवाहेत्तर सम्बन्धमा रहने गरेका पाइन्छन् […]
नयाँदिल्ली : चिनियाँ कम्पनीले तयार पारेको एप्स टिकटकमा भारतमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ । भारत र चीनको सीमा विवादले हिंसात्मक रुप लिएपछि भारतमा टिकटकसँगै अन्य ५८ वटा एप्स प्रतिबन्धित बनेका हुन् । तीमध्ये अधिकांश चिनियाँ नै छन् । टिकटक चिनियाँ कम्पनी बाइटडान्सले विकास गरेको हो । छोटो भिडिओ बनाएर अभिनय गरिने टिकटक पछिल्लो समय युवा पुस्तामा […]
अस्पतालमा धनकुटाकी कोरोना संक्रमित महिलाको मृत्यु